Arday Loo Diiday In Ay Galaan Imtixaanka dawlada Soomaaliya Qaadayso 20 Bisha May Ee Sanadkaan | Codkamudug.com	Home
Saturday, April 29th, 2017 | Posted by hanadyare Arday Loo Diiday In Ay Galaan Imtixaanka dawlada Soomaaliya Qaadayso 20 Bisha May Ee Sanadkaan
Dallada Waxbarashada FPENS oo ay hoos tagaan dugsiyo badan oo waxbarasho ayaa sanadkan diidday in ay imtixaanka dugsiga sare u fadhiistaan in ka badan 400 oo arday, kuwaasoo sanadkan dhammaynaysa fasalka 12aad ee Dusiyadda Sare.
Ardaydaan ayaa sanado ka hor u soo bedeshay dugsiyada hoos taga FPENS, iyagoo ka soo wareegsaday Dallado kale, maamulka dugsiyada ay ku biireen ayaana ardayda u sheegay in aysan imtixaanka kama dambaysta ah ee dugsiga sare aysan geli karin maaddaama ay diidday FPENS.
Sidoo kale ardaydan ayaan heli doonin fursad ay ku galaan imtixaanka dowladda, maaddaama ay dalladaha iyo wasaaradda waxbarashadu ku heshiiyeen in ardayda imtixaanka dowladda galaysa ay soo gudbiyaan dalladuhu.
Mid ka mid ah waalidiinta ardaydaan ayaa Jowhar.com u sheegtay “Wiilkaygu 12 sano ayuu dhiganayay dugsi, Sanadkaan waxa uu dhammaynayay dugsiga sare laakin waxaa dugsigu noo sheegay in FPENS diidday, ma garanayo waxa jira laakin waa niyad jab iyo walwal arrintani”.
Ardayda ayaa tiro ahaan gaaraysa 420 arday, dhammaantood sanadkaan ayay qalin jabin lahaayeen, waxaana FPENS waxa ay ku doodaysaa in ardaydani ay ka soo wareegsadeen dugsiyo aan dalladdooda hoos tagin, isla markaana aysan imtixaan ka qaadi doonin.
Wasaaradda Waxbarashada iyo dalladaha oo muddooyinkii la soo dhaafay isku maandhaafsanaa habka loo qaadayo imtixaanka dugsiyada sare looga baxayo ayaa isku afgartay in dalladuhu ay wasaaradda u soo gudbiyaan ardayda imtixaanka laga qaadayo.
Taas ayaa ka dhigan in ardaydani aysan heli doonin fursad maaddaama ay diidday FPENS in ay gudbiso. Dugsiyada ay dhigtaan ardaydani ayaa cabasho ugu tagay wasaaradda waxbarashada si arrintaan xal loogu helo, hase yeeshee wax go’aan ah wali ma aysan ka gaarin wasaaraddu.
Agaasimaha guud ee wasaaradda Waxbarashada Maxamed C/qaadir ayaa horay uga mid ahaa mas’uuliyiinta dallada FPENS ee iminka diidday ardayda, ka hor inta aan loo magacaabin agaasimaha guud ee wasaaradda.
Dallada FPENS oo aan xiriir kala sammaynay wali nooma suurta galin in aan helno, hase ahaatee tallaabada ay ku diiday in Ardayda ay sanadkan ka qeyb galaan imtixaanka, waxaa walaac ka muujiyay waalidiinta ardaydaas